အရပ်စာချုပ်များဖြင့် အထပ်မြင့်များ ဆောက်ခွင့်မပြု
ပို့စ်တင်ချိန် - 10/30/2013 03:06:00 PM
ရန်ကုန် ၊ အောက်တိုဘာ ၂၉ ။ ။မြေ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ အရပ်စာချုပ် သာရှိပါက အထပ်မြင့် ဆောက်လုပ်ခွင့်မပြုကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင် သာယာ ရေးကော်မတီမှသိရသည်။ ယင်းအပြင် ဆိတ်ငြိမ်ရပ် ကွက်နှင့် အင်းလျားကန် နှင့် ဆက် စပ်နေရာများတွင်လည်း အထပ် မြင့် ဆောက်လုပ် ခွင့်မပြုကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင် နီယာဌာန (အဆောက် အအုံ) ဌာနမှူးဦးမောင်မောင်ဇော်က ''ဂရန်အမည်ပေါက်ဆိုရင် လုပ် ထုံးလုပ်နည်းနဲ့အညီ အထပ်မြင့် ဆောက် လို့ရပါ တယ်။ အဆင့်ဆင့် ရောင်းချထားတဲ့ အရပ် စာချုပ်ဆိုရင်တော့ သုံးထပ်အဆောက် အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုပါတယ်'' ဟု အောက်တိုဘာ ၂၉ရက်က ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာ ရေးကော်မတီ(၁၀)ထပ်ရုံး၌ ကျင်း ပသောအဆောက်အအုံဆောက် လုပ်ခွင့်များ ဆောင်ရွက်ပေးမှု နှင့် ပတ်သက် သည့် သတင်းစာရှင်း လင်းပွဲတွင်ပြောသည်။ အဆောက်အအုံဆောက် လုပ်ရန်ခွင့်ပြုချက် တောင်းခံရာ တွင် အရပ်စာချုပ်ဖြင့်လျှောက် ထားမှုမှာ ၂ဝရာခိုင်နှုန်းရှိနေ ကြောင်းသိရသည်။
အရပ်သားစာချုပ်ဖြစ်ပါ ကသုံးထပ်အဆောက်အအုံ သာ ဆောက်လုပ် ခွင့်ပြုသော် လည်း ဆောက်လုပ်ခွင့်တင်ပြပါက နှစ် လခွဲအတွင်း ဆောက် လုပ်ခွင့်ပါ မစ်ကိုချထားပေးကြောင်း၊ ဂရန် အမည်ပေါက်ဖြင့် မြေပိုင်ဆိုင်မှု မှန်ကန်ပါက သုံးထပ်ခွဲ အဆောက် အအုံများကို ၄၅ရက်အတွင်း ခွင့် ပြုပေးသည် ဟု သိရသည်။
ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း ရှင်တစ်ဦးက ''ဒီမှာက အရပ်စာ ချုပ်တွေနဲ့ချုပ်ကြတာ များတာ ကိုတွေ့ရတယ်။ အိမ်အရောင်းအ ဝယ်တွေကလဲ လွယ်လွယ်ကူကူ လက်လွှဲ ရောင်း ပြီး စာချုပ်ကိုအ ရင် စာချုပ်ချုပ်ကြတာဆိုတော့ သူတို့တွေမှာအထပ်မြင့် ကန်ထ ရိုက်ပေးတာတွေ လုပ်မယ်ဆိုရင် အခက်အခဲတွေ ကြုံနိုင်တာကို ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ပေးမ လဲဆို တာ ထပ်မံညှိနှိုင်းပေးဖို့လိုမယ် ထင်ပါတယ်''ဟု သုံးသပ် ပြောသည်။
သက်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာများ ပိုမိုဖတ်ရှုရန် ===> real-estate-news
မြန်မာ ကုမ္ပဏီများ မှတ်ပုံတင်ရာတွင် မ' တည်ငွေရင်းနှ...
$25 ကနေ $848,000 ငွေပွားသွားသူ
သျှမ်း/မြောက်ဒေသခံများ ရရန်ကျန်သည့် ပိုက်လိုင်းသိမ...
လေးဖြူ ဒိုင်ယာရီ - lay phyu diary (listen or downl...
လုပ်ခ တိုးပေးရန် တိုင်ကွန်း အထည်ချုပ်လုပ်သား ၅၀၀ေ...
တစ်ရက်တည်းနဲ့ မြန်မာတပ်နှင့် တအာင်းတပ်တို့ သုံးကြိ...
၁၉၉၀ ၀န်းကျင်နိုင်ငံရေးနှင့် အသံတိတ် နိုင်ငံရေး ဆေ...
KIO ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းမှ စစ်ရှောင်ဒုက္ခသည် ငါးရ...
မောင်တောကြိမ်ချောင်းဈေးမီးလောင်၊ ဆိုင်ပေါင်း ၁၀၀ ...
ယောက္ခမ က ဥာဏ်ကောင်းချက် .. funny
အရက်သောက်ခြင်းရဲ့ ဆိုးကျိုး (ဟာသ)
Facebook ကိုလွမ်းမိုးခဲ့သူ - Chris Putnam
ပြည်သူပြည်သား မိအေး နှစ်ခါနာများ
နေပြည်တော် ဆီးဂိမ်းဖွင့်ပွဲ အစိုးရလျှပ်စစ်မီး မသုံ...
မြန်မာ့အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဒီ...
မလေးရှားတွင် မြန်မာနိုင်ငံသားများ အပါအ၀င် တရားမ၀င်...
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခ နှစ်ဆအထိ တိုးမြှင့်ခြင်းအား နှစ်ရ...
ကာတွန်း ဦးအောင်ရှိန် အသက် ( ၈၆ )နှစ် ကွယ်လွန်
မိုင်းရှူး - တောင်ကြီးလမ်း သုံးရက်ဆက်တိုက် ဓါးပြတိ...
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် စက်လှေပျက်က ထွက်ပြေးသူ ၁၈ယောက် ထပ်မိ
သီလ၀ါစက်မှုဇုန် ပူးပေါင်း တည်ထောင်နိုင်ရေးအတွက် မြန...
လမ်းညွှန်ဆိုင်းဘုတ် အသစ်တပ်ဆင်မှုနှင့် ပျက်စီးနေသော ...
ရန်ကုန်မြို့တွင် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု ဆိုးရွားလာ၍ အသ...
သီလ၀ါ အထူးစီးပွားရေးဇုန် ပထမအဆင့် စီမံကိန်း ဧရိယာအ...
အချိန်အခါမဲ့မိုးကြောင့် ပဲခူးရှိ ရေလှောင်တမံနှင့် ...
မလေးသို့ခိုးထွက်သည့် ဘင်္ဂါလီအများစု ရသေ့တောင်တွင် တ...
တနင်္သာရီ မြစ်ကြောင်းရှိ ရွာတချို့တွင် ကမ်းပြိုမှုမျာ...
တန်ဖိုးနည်းဖုန်းကတ် မသမာနည်းဖြင့် ခွဲဝေမှုရှိ ကြောင...
မီတာခများ တိုးမြှင့်လိုက်သော်လည်း ဓာတ်အားပေးမှု ထူး...
ရန်ကုန်တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှင့် ကန်တော်ကြီးကို ရွှေတိဂုံ...
ရွှေတောင်-မြောင်းတကာ မဟာဓာတ်အားလိုင်း ပြတ်တောက်မှြုေ...
အိုင်တီခေတ်မှာ မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက် မြန်မာမှုပြု...
ဆီးဂိမ်းခြင်းလုံးဂိမ်း iOS Version ဖြန့်ချိရန်စီစဉ်
ရာထူးဆိုရင် အာဏာလား… ဒါမှမဟုတ် တာဝန်လား
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ကြီး သုံးခုတွင် မူးယစ်ဆေးဝါ...
စကုမြို့နယ်မှာ ကျေးရွာ ၂၀ ကျော် ရေနစ်မြုပ် (ရုပ်/သံ)
အမြန်လမ်းမကြီး ပြွန်ပေါက်အတွင်း တွေ့ရှိရသည့် အမျို...
လူနာက ဆရာဝန်ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့သဖြင့် တရုတ်ကျန်းမာရေးဝန...
စစ်ဘက် ဆက်ဆံရေး တိုးမြှင့်ရန် အိန္ဒိယ ကြည်းတပ် ဦးစီ...
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်စိုး ဦးဆောင်သည့် နေပြည်တေ...
တိုင်းရင်းသား နယ်မြေများတွင် စီမံကိန်းကြီးများ မဆေ...
Huawei ဖုန်းကုမ္ပဏီကို သြစီ ဝင်ခွင့်မပေးတဲ့အပေါ် တရု...
Hair Loss in Women Treatments ဆံပင်ကျွတ်တာ ဘာနဲ့ကုမလဲ
စွဲထင်ကျန်ရစ်နေသော ဘာလင်နေ့ရက်များ စွဲထင်ကျန်ရစ်နေ...
The Voice Daily မှ သတင်းထောက်တစ်ဦး နေပြည်တော် ပျဉ်...